MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA BOGLEN TERRIER DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Boglen Terrier Dog
Eeyaha Beagle / Boston Terrier Mixed Sreed Dogs
Tasha Boglen Terrier ( Gorgor / Boston Terrier qas ey ey) markay tahay 1 1/2 sano jir— 'Ciyaal weyn. Waxay iyada u heshay sida a eey at 10 toddobaad jir. Aad u fudud tareenka guriga iyo guud ahaan a si dhakhso leh wax u barta . Tamarta ayaa ah mid aan laga fiirsan ... 3 mayl socod ah celcelis ahaan maalintii, oo lagu daro saacad ciyaarta ka dib. Iskudhaf agagaarka shisheeyayaal , gaar ahaan ragga, laakiin jecel carruurta . Difaac iyo jacayl buuxa. Runtii eeygii ugu fiicnaa ee aan lahaa. Mid kale ayaan ku heli lahaa garaaca wadnaha!
Boglen Terrier ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Gorgor iyo Boston Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Pudgy 6 jirka Boston Terrier / Beagle eey isku dhagan (Boglen Terrier) - milkiilaheeda ayaa leh, Waxay leedahay dabeecadda ugu cajiibka badan runtiina waa eeyga ugu fiican ee aan abid leeyahay. Way garaneysaa goorta la ciyaarayo iyo goorta ay is dejiso. Aad bay u deggan tahay, oo waxay ka dhawaajineysaa wicitaankeeda Beagle markay baqeyso. Runtii waxay leedahay maskaxda Beagle. Pudgy xitaa wuu ceyrsaday deerada wuxuuna ku sigtay inuu qabto. Iyadu waa wax la yaab leh carruurtayda waxayna u dulqaadataa wax kasta. Waxaan lahaa iyada tan iyo markii ay ahayd 2 sano jir milkiilayaashii hore waxay ahaayeen xubno qoys oo ninkeyga ah. Taasi waa sababta aan u ogaanno hubaal waxa ay ku qasantahay. Iyadu ma hayso wax dhibaato caafimaad ah noocuu doono ha noqdee. Sifada kaliya ee ka maqan waa damaca ay sanka u raacdo. Tani waxay ku dhacdaa dhibaato mararka qaarkood oo xitaa waxay ku buufisay dambas.
'Daisy eyga, ayaa ahaa korsaday Hoyga xoolaha oo ay ku jirtay muddo 2 bilood ah. Waxay ahayd 2 sano jir markii sawirkan la qaaday. Wixii aan ku arkay, iyadu waa eeyga ugu macaan ee qof waligii arko. Iyadu ma laha dabeecad sarreysa, laakiin subax walba socod dheer ayuu ku raaxeeyaa . Markii hore, way dhib badneyd markii dareenkeeda Beagle ay la wareegtay waxay raacday caraf walba, xitaa way ku carartay socod. Nasiib wanaag, walaashay marwalba way qabsan jirtay Daisy. In cabbaar ah, iyaduna way lahayd kala-goynta walaaca, jeexjeexa guriga marka guriga keligiis la joogo. Laakiin hadda, walaashey waxay tiri waa eeyga ugu macaan uguna fiican. Mar dambe ma sii wado wax xun. Daisy waxay jeceshahay inay salaaxdo waxayna jeceshahay inay ku seexato dhabtaada oo ay khuujiso. Xitaa busteyaal ayey isku duubtaa oo waxay kula seexan doontaa sariirti saacado badan markay daallan tahay. Dadka eyda neceb way jecel yihiin !! '
'Cora the Boglen Terrier (Beagle / Boston Terrier ey' hybrid) oo jira 1 sano ayaa buuxsamay mana culeyskiisu ka badan yahay labaatan rodol ama wax la mid ah. Way yar tahay ... AAD BADAN YAHAY, marna tamar ma dhammaato. Run ahaan astaamaheeda Beagle, waa inay wax walba urisaa oo ay leedahay ugaarsi xoog leh. Way qaban kartaa oo qaban kartaa oo dishaa bakaylaha duurjoogta ah, sidaa darteed waa inaan taxaddar dheeraad ah yeelanno markaan ku qaadno socodka. Wax yar oo adag in la tababaro, maaha caqli yaraanta, laakiin feejignaan aad u gaaban awgeed. Iyadu waa gebi ahaanba jecel yahay oo aad u macaan. Waxay jeceshahay inay ku ciyaarto calaamadda Boston Terrier Peppy oo buuxa. Wanaagsan eeyo leh cabirkeeda iyo ka weyn, kuna fiican bisadaha ku saabsan cabirkeeda sidoo kale. Ma ciyo badanaa. Mararka qaarkood waxay ka ooyaan cayayaanka urta ee ku wareegaya daaradda, laakiin taasi waa ku saabsan tahay. Waxay jeceshahay inay salaaxdo laakiin waa marka loo oggolaado inay xoogaa wareegto. DEG DEG AH. Diidan yahay cawska. Ku fiican carruurta. Iyadu waa waalan tahay, laakiin waan jecel nahay iyada. Milkiileyaasha suurtagalka ah waa inay wax ka ogaadaan heerka tamarta ... iyo wadista ugaadhsiga. '
Cora the Boglen Terrier (Beagle / Boston Terrier mix breed dog) at 1 sano jir
cad bulldog Maraykan leh dhibco madow
'Kani waa cunuggeyga' Boston Terrier / Beagle 'eey isku dhafan oo loo yaqaan Lacag 9 jir ah. Waa cunug aad u jecel oo firfircoon. Waxaan sidoo kale aragnay inuu aad u caqli badan yahay una feejignaado waxa ka socda hareerahiisa. Tani waa markii ugu horreysay ee aan yeelano isku dhafan, laakiin isku dhafka ayaa u muuqda mid hagaagsan. Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro eeyaha kale ee nooc kasta leh, cabsi badan ma qabo waana mid bulsho badan. Waxaan dhab ahaan u aragnaa dhinaca Beagle wax badan. Sankiisa ayaa dhulka yaal wuuna urin karaa wax kasta oo cunto ah oo agtiisa ah. Waxaan u maleyneynaa inuu noqon doono eey weyn, laakiin wuxuu u baahan doonaa tababar badan iyo anshax dusha jacaylka oo dhan. '
Farshaxanka isku dhafka Boston / Beagle eey ahaan - 'Fergus waa eeyga ugu fiican ee aan abid haysto. Wuxuu jecel yahay inuu dhuuqo oo i soo raaco hareeraha, marar dhif ah buuqaa, (ma ahan eey waardiye fiican lol). Wuxuu sifiican ula ciyaaraa eeyaha kale iyo xitaa bisadaha. Wuxuu jecel yahay dhididkiisa bilaha qabow, maadaama uusan timo badan lahayn. Si aad u wanaagsan ayuu u tababbaray, gurigu toddobaad gudihiis ayuu jabay, wuuna yaqaan amarrada. Xitaa wuu isku duubay! Lugtiisa kor uma qaado inuu saxaroodo, waxaa laga yaabaa inuu wax ku sameeyo si deg deg ah loo hagaajiyo (?) , laakiin ma waxaay fidsan tahay in la saxo. Aad ayuu u caafimaad qabay wax dhib ahna kalamaan kulmin. Waligiis waxba ma calalin, WALIGE! EEY UGU FIICAN WALIGE !!! '
Farsiinta birta iyo caddaanka Boston / Beagle oo isku dhex jira sidii ey ey dhulka ku seexanaya.
Bosey the big brindle and white Boston Terrier / Beagle mix puppy (Boglen Terrier) at 5 bilood jir
shar pei iyo husky mix
Bosey eyda isku dhafka ah ee loo yaqaan 'Boston Terrier / Beagle' (Boglen Terrier) oo 10 toddobaad jir ah oo in ka yar 4 rodol ah - milkiilaheeda ayaa leh, 'Waxay leedahay tamar badan waxayna jeceshahay inay ciyaarto' qaab eey 'ah. Markay wax walba is rogto waxay jeceshahay inay isku laabto dhabarkayaga si aan u seexano. '
Bosey eeyaha 'Boston Terrier / Beagle mix' (Boglen Terrier) oo 10 toddobaad jira wax ka yar 4 rodol
'Tani waa Brady, Boglen Terrier-keena madow. Waxaan ka helnay iyada oo loo marayo hay'adda korsashada iyo sheekadiisa waxaa laga soo badbaadiyay guri dayac ah oo ku yaal Tennessee markii uu jiray bil. Hadda wuxuu ku dhow yahay lix bilood wuxuuna u tixgeliyaa dhakhtarkayaga xoolaha inuu si buuxda u koray. Wuxuu hadda miisaankiisu yahay ~ 18 lbs. waana ~ 17 `` dherer Brady waa ilmo weyn. Wuxuu jecel yahay inuu dhuuqo oo waa eeyaha dhabta ah mararka qaarkood laakiin sidoo kale waa aad u firfircoon . '
Waxaan u tixgelineynaa inuu yahay mid aan baqdin lahayn maxaa yeelay wuxuu toos ugu socdaa noocyada waaweyn ee inaga baarkinka eyda ee deegaanka oo uu ku lug yeesho ficilka. Isagu waa qof ciyaar badan oo had iyo jeer afkiisa ku haysta kubbad ama wax lagu calaliyo. Wuxuu ahaa qof ficil ah markii hore laakiin xoogaa tababar ah wuxuu isku badalay eey si wanaagsan u dhaqmay. Wuxuu jecel yahay eeyaha kale waana weyn yahay dadka kale sidoo kale. Tababarka dheriga waxay ahayd dabeyl oo Brady waligiis shil kuma dhaco gudaha. Waqti kasta oo uu ubaahan yahay inuu 'tago' wuxuu si fudud u fadhiistaa albaabka dambe si uu noogu sugo inaan isaga fasaxno. '
Waxaan u tixgelineynaa dabeecadihiisa ugu fiican inay noqdaan sida uu maskaxdiisa u fikiro. Waxay qaadatay xoogaa dulqaad laakiin Brady sifiican ayuu u dhageystaa oo yimaado markasta oo loo yeedho bilaa shaki. Waa eey aad u daacad ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay Brady marka laga reebo caadadiisa ku boodaya martida . Wuu soo fiicnaaday waxaanan dareemeynaa tababar yar oo dheeraad ah waan ka takhalusi doonaa dhaqankan xun. '
Waxa uu leeyahay daadin qunyar socod ah. Waxaan ogaanay in dhaqso, cadayasho maalinle ah ay ka caawiso baabi'inta qaar ka mid ah arintan. Wuxuu sidoo kale helaa qubayska shaamboo qalalan 2-3 jeer usbuucii si uu ula dagaallamo dhibaatada. Tani waxay sidoo kale ka caawisaa isaga maqaar qalalan oo fudud . Leyligiisa wuxuu ka kooban yahay socod maalinle ah hareerahayaga qashin-qubka qiyaastii 10-15 daqiiqo. Waxaan isku dayeynaa inaan u kaxeyno jardiinadeena eeyga xaafadda qiyaastii 2-3 jeer usbuucii si aan ugu oggolaano inuu tamartiisa ka baxo. Isku soo wada duuboo waxaan ahayn kuwo aan aqoon u lahayn isku dhafka noocan oo kale mana ogayn in xitaa la siiyay cinwaan ah Boglen Terrier. Wuxuu noqday eey weyn.
Jack Russell eeyaha isku darka Pit
Winston the Boglen Terrier (Beagle / Boston Terrier mix bre eye) markuu jiray 6 sano
Winston the brindle and white Boglen Terrier (Beagle / Boston Terrier mix bree ey) markay jiraan 6 sano
Winston the brindle and white Boglen Terrier (Beagle / Boston Terrier mix bree dog) at 6 sano jir oo ku foorarsanaya tiirarka baarkinka eeyga
eey eyda bilaabo z
Eeg tusaalooyin badan oo Boglen Terrier ah
Boglen Terrier Sawirada 1
lo'da godka dibiga qaso
nus shaybaar madow nus daahir dahab ah
badh wiener eey badh chihuahua
ma ey eey is fahmaan